Guddiga EACC oo soo jeediyay in xabsi daa’in lagu xukumo dadka ku kaco musuqmaasuqa – The Voice of Northeastern Kenya
Guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ee EACC ayaa maanta baarlamaanka dalka u soo jeediyay inuu soo saaro sharci dhigaya in eedeysanayaasha lagu caddeeyo inay sameyaan falalka musuqmaasuqa lagu xukumo xabsi daa’in.
Guddoomiyaha guddigan , Eliud Wabukala ayaa sheegay in sida keliya ee lagula tacaali karo wax isdaba marinta ay tahay in ciqaab adag la mariyo dadka ku lug lahaado.
Mr. Wabukala ayaa shacabka iyo warbaahinta ka codsaday inay dowladda garab ku siiyaan la dagaalanka musuqmaasuqa oo ay guddiga ku soo war geliyaan kiisaska lagu lunsado kheyraadka dadweynaha loogu adeego iyo boobka dhulalka.
Guddiga EACC ayaa sheegay inuu dib u soo celiyay hanti qiimaheedu yahay 780 milyan oo shilin oo laga dhacay ismaamulada Nakuru iyo Bomet .
Shalay ayay ahayd markii barasaabkii hore ee dowlad deegaanka Kiambu ee gobolka bartamaha dalka Mr. William Kabogo uu dowladda dhexe ugu baaqay inay soo afjarto falalka musuqmaasuqa ee ka dhex jiro waaxyaha kala duwan.
Waxaa uu soo jeediyay in tallaabada habboon laga qaado wasiirrada iyo xoghayayaasha lala xariiriyo lunshada kheyraadka dadweynaha loogu adeego.
Mr. Kabogo ayaa wacad ku maray in hadii dowladdu aynan tallaabo deg deg ah qaadin uu Kenyaanka kale ku hoggaamin doono inay tagaan xarumaha wasaaradaha kala duwan si ay gacanta ugu soo dhigaan wasiirrada iyo xoghayayaasha la farfiiqay .
← DHAGEYSO WARKA FIIDNIMO EE IDAACADDA STAR FM 20:30 PM 21-3-2019
Siyaasiyiinta xisbiga ODM oo ku xigeenka madaxweynaha dalka dhaliil u jeediyay →